सरकार, मिडियाले मलाई गुण्डाजस्तो बनाए: पप्पु कन्स्ट्रक्सनका मालिक रौनियार - Yatra Daily
Home बिचार/अन्तर्वार्ता सरकार, मिडियाले मलाई गुण्डाजस्तो बनाए: पप्पु कन्स्ट्रक्सनका मालिक रौनियार
पप्पु कन्स्ट्रक्सनका संस्थापक तथा संघीय समाजवादी फोरमका सांसद हरिनारायण रौनियार अचेल चर्चामा छन्। पप्पुले ठेक्का पाएका कतिपय पुल समयमा नसकिएका, कति भासिएका रिपोर्ट मिडियामा आएका छन्। सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको काम समयमा नसकेको भनेर सरकारले उनलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। सांसद रौनियारका छोरा सुमित रौनियार स्थानीय प्रशासनले लगाएको मुद्दाका कारण ‘अर्धभूमिगत’ अवस्थामा छन्। यी सबै विषय समेटेर अमित ढकाल र खिलानाथ ढकालले सांसद रौनियारसँग गरेको कुराकनीको सम्पादित अंश:
यो आरोप सही होइन। मैले निर्माण क्षेत्रमा इमानदारपूर्वक काम गरेको छु। कहीँकतै अनियमितता गरेको छैन। जहाँ-जहाँ काम बिगारेको आरोप लागेको छ, ती सबै ठाउँमा के-कति समस्या आए, त्यसको यथार्थ मसँग छ। म सबै कुरा भन्छु। राजनीतिक रूपमा म जसरी आएँ, त्यसपछि मलाई मेरो पेसासँग जोडेर खेद्न थालिएको हो। मसँग असन्तुष्ट रहेका व्यक्तिले भएका–नभएका आरोप लगाएर प्रचार गरे।
मलाई बदिर्याको बबई नदीको पुलसँग जोडेर भ्रष्टाचार मुद्दा लगाइएको छ। यहाँ विल्कुल मेरो बदमासी छैन। बदमासी कसले, कसले गरेका छन् म आज भन्छु।
सडक विभागले पुलको डिजाइन पहिलो पटक २०६७ सालमा तयार पारेको थियो। त्यो डिजाइनमा बबईको पुलको जग ‘वेल फाउन्डेसन’ बनाउन सिफारिस गरिएको थियो। बबई नदीको प्रकृति, पानीको बहावको इतिहास हेरेर त्यस्तो सिफारिस गरिएको हो। त्यसरी पुल बनाउदा ४० करोड रूपैयाँ बजेट अनुमान गरिएको थियो। सडक विभाग सकेसम्म कम रकममा ठेक्का लगाउन चाहन्थ्यो।
बबई पुलको डिजाइन गर्न विभागले एभरेस्ट इन्जिनियरिङ कम्पनीलाई फेरि जिम्मा दियो। रकम घटाउने योजनाअनुसार त्यो कम्पनीलाई डिजाइन तयार गर्न दिइएको थियो। त्यो कम्पनीले फिल्डमा नगइकन, बिनाअध्ययन सात दिनमै पुलको जग ‘पाइलिङ फाउन्डेसन’ मा बनाउन सकिने रिपोर्ट दियो। पाइलिङ गरेर बनाउँदा पुल २१ करोड जतिमा बन्थ्यो। वेल फाउन्डेसन भनेको पुलको जग इनारजस्तै गरेर बनाउने हो, पाइलिङ फाउन्डेसन भनेको खाँबो गाडेजस्तै गाड्ने हो। संसार नै वेल फाउन्डेसन पुलको जग राख्ने उत्कृष्ट विधि हो। समुन्द्रमा बन्ने पुलको जग पनि वेल फाउन्डेसनमा बनाइएको हुन्छ। यो प्रविधि बलियो तर महंगो भने छ।
विभागले दिएको डिजाइन अनुसार पुल निर्माण गरियो। त्यही डिजाइनका आधारमा १८ वटा पिलर गाडिएका थिए। निर्माण सम्पन्न भएर २०७३ असार ३१ मा पुल हस्तान्तरण भयो। २०७४ को भदौ २९ गते बबईमा आएको बाढीले पुलको फाउन्डेसनमा असर गर्‍यो। पुल भासियो। गलत डिजाइन गरेको भनेर अख्तियारले नै एभरेष्ट कन्सल्टेन्सीलाई पनि मुद्दा हालेको छ।
सडक विभागले पुल्चोक इन्जिनियरिङ संस्थालाई अध्ययन गर्न पठाएछ। मलाई त्यसको जानकारी पनि दिइएन। फिल्डमा गएर त्यो संस्थाले खोजीनीति पनि गरेन। उसले पिलरको जाँचबुझ गरेछ। जाँचबुझ गर्दा १५ मिटर गाड्नु पर्ने पिलर ५ मिटरमात्र गाडेको रिपोर्ट दिएछ।
काम समयमा गर्न थुप्रै बाधा व्यवधान आएपछि मैले ठेक्का सम्झौता अवधि बढाऔं भनेर आयोजनालाई पटक-पटक पत्र लेखेँ। न गरेको कामको पैसा आयो न ठेक्काको समय बढाइयो। आयोजनासँग मलाई काम लगाउने पैसा पनि थिएन। त्यो नहर साउदी अरबको लगानीमा बन्न लागेको हो। समयमा काम नभएपछि साउदीले सोध्यो- किन काम सकिएन? विभागका मान्छेले आफ्नो गल्ती ढाकछोप गर्न ठेकेदारको टाउकोमा दोष देखाए। समयमा काम नसकिएपछि साउदीले पैसा दिन्न बन्यो।
लालबकैया नदीको टिकुलिया पुल निर्माणमा पनि पप्पु कन्स्ट्रकसनले काम ढिलाइ गरेको छ। त्यसमा तपाईंविरूद्ध स्थानिय प्रशासनले मुद्दै हालेको छ नि?
गत भदौमा टिकुलियामा दुर्घटना भयो। १० जना क्षमता रहेको ढुंगामा २५ जनभन्दा बढी हालेर नदीमा कुदाइयो। नदीमा बाढी आइरहेको थियो, बहाव थाम्न नसकेर नदीले डुंगा बगायो। डुंगा बग्दै आएर पुलको पिलरमा ठोक्कियो। पिलरमा ठोक्किएपछि डुंगा बीचमा भाँचियो। पाँच जनाको मृत्यु भयो। डुंगा बगेर आएर पिलरमा ठोक्किई दुर्घटना भएकोमा पनि म दोषी? मेरो छोरालाई विपक्षी बनाएर ज्यान मार्ने उद्योगमा मुद्दा चलाइएको छ। बाढीमा बग्दै डुंगा पुलमा आएर दुर्घटना हुन्छ, यसमा पुल बनाउने मान्छेको के दोष? यो समस्याबारे स्थानीय जनताहरूसँग कुरा भइरहेको छ। यो मुद्दा ‘सेटल’ हुने अवस्थामा छ।
चौथो, पुल निर्माणमा सरकारले पर्याप्त बजेट छुट्याउँदैन। गत वर्ष तीन अर्ब छुट्याइएको थियो, ११ अर्बको काम निर्माण कम्पनीहरूले गरेका छन्। असारको अन्त्यमा आएर बल्ल फाष्ट ट्र्याक र अन्यत्रको पैसा तानेर साढे नौ अर्बको भुक्तानी दियो। निर्माण व्यवसायीको साढे एक अर्बको भुक्तानी बाँकी नै छ। अहिले देशभरी १५ सय पुल निर्माणाधीन छन्। ९ सय पुल त स्थानीय स्तरमा मात्र छन्। ती सबै पुलको लागत मुल्य जोड्यो भने ६३ अर्ब हुन आउँछ। अहिलेको गतिमा सरकारले प्रति वर्ष तीन अर्बमात्र छुट्टयाउने हो भने ती स्थानीय तहाक पुल को निर्माण सम्पन्न गर्न मात्र २१ वर्ष लाग्छ।
म चार वा पाँचमा त पक्कै पर्छु। सभार सेतोपाटीबाट
Previous articleकार्यविधि छैन : विकास निर्माण ठप्प
Next articleप्रदेश-२ का मन्त्री सोनल भन्छन्: योगी आदित्यनाथ हाम्रा नाति, ‘ननिहाल’ ले उनको भव्य स्वागत गर्छ